အိုဟောင်းပြီးသော တနင်္ဂနွေ နှင့် ဓါတ်ပုံများ
တနင်္ဂနွေနေ့ မနက်ခင်းတစ်ခု၌ ကိုနေမိုးဝေ ကို ဒုက္ခ ပေးရန် အကြံမျိုးစုံကို ထုတ်နေ၏။ ထို့နောက် မနက်စာ စားမည် ဟု ပြော၍ သူနှင့် ရွှေတိဂုံ စေတီသို့ ထွက်လာခဲ့ကြသည်။( မှတ်ချက်... ထိုနေ့က သူ ၀မ်းသွားနေသည်)
မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ ကျွန်ုပ်နှင့် ကိုကြီးနေမိုးဝေသည် ရွှေတိဂုံသို့ ရောက်ခဲ့ကြသည် ။
ထိုအခါ . . . . .
ရွှေတိဂုံ စေတီ ကို ဤ သို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့၏။
ထို့နောက် တဖန် . . .
ဤ သို့ လည်း ရှု့ ပါ အံ့။
စေတီကို ကြည်ညို ပြီး သည် ဖြစ်စေ/ မဖြစ်စေ.... ။
စေတီရင်ပြင်ပေါ်မှ လူများကို ဤ သို့ တွေ့ ရလတ္တံ့ ။
ထိုနေ့က ဘာနေ့လည်းတော့ မမှတ်မိတော့ သို့သော် လူစည်းကားလှ၏။
ထိုလူများထဲတွင် Fuck Me Jesus ဆိုသော အင်္ကျီနှင့် ပုဂ္ဂိုလ် ကိုလည်း တွေ့ နိုင်၏။
ထို့နောက်တွင် ကား ကျွန်ုပ်သည် ခေါင်းလောင်းထိုးနေသော ကလေးငယ်အား ခံစားချက်မဲ့စွာ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့သည်တို့ ကုန်၏။ (ခံစားချက် အတန်ငယ် ကင်းမဲ့လျှက်ရှိ၏)
Posted by မောင်ရှင်းသန့် at Monday, November 23, 20094comments
Rangoon University's Photo
ကိုနေမိုးဝေနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲ လျှောက်သွားရင်းရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ ကင်မရာ အကောင်းနဲ့ ကျနော့်ရဲ့ ကင်မရာ အစုတ် ရဲ့ ပုံတွေကို စုပေါင်းစပ်ပေါင်း တင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာ . . . ။
ဒါကတော့ ဂျက်ဆင် ရဲ့ ပုံပါ ခင်ဗျာ ။ အန်တီဝါ တောင်းဆိုထားတာ ငါးလလောက်ရှိပါပြီ ။ အခုမှ ရိုက်ပေးဖြစ်တယ်ခင်ဗျ။
ဒါကတော့ အဆောင် ။ အဆောင်တော့ အဆောင်ပဲ ဘာအဆောင်လဲတော့မသိဘူး ဗျ ။
ဒါကလည်း စင်္ကြာန်လမ်း ပဲ ။ နာမည်တော့ မေ့သွားပီ ။ ဟီးးးးး ။
* * * * * ဒါကတော့ ကျောင်းသား သမဂ္ဂနေရာ ဟောင်းပါခင်ဗျာ ။
* * * * * ဒါကတော့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ နေရာ ဟောင်းနားလေးမှာ ထောင်ထားတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် ပါ။ No Trespassing ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို Dictionary ထဲမှာ မကျူးကျော်ရလို့ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဘယ်လိုသဘောထားနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုမလဲ မသိဘူးနော် . . ။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ထဲက ပုံရိပ်တွေကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းသာ . ။ ။
Posted by မောင်ရှင်းသန့် at Tuesday, July 28, 20099comments
မပုကြွယ်နဲ့ ခရုငယ်တဲ့ . . . . ။
ငယ်ငယ်တုန်းက တော်တော်ရေပန်းစား တဲ့ ကျောင်းပုံပြင်လေးပေါ့။ အဲဒီပုံပြင်လေး သင်ခဲ့ရတာ ၁ တန်း လား ၊ ၂ တန်း လား တောင် မမှတ်မိတော့ဘူး။
ခရုလေး အကြောင်း အဲဒီတုန်းက အိပ်မက်တောင် မက် တယ်။ ခြံစည်းရိုး တိုင်ပေါ် တက်လိုက် ၊ ပြုတ်ကျ လိုက်နဲ့ ။
နောက်ပိုင်း ကျတော့ အဲဒီခရုလေးလိုပဲ ကျွန်တော်လည်း ခဏ ခဏ ပြုတ် ကျတယ်။
သူလိုပဲ ပြန်တက်ပေါ့ ။ ပြုတ် ကျ လိုက် ၊ ပြန်တက်လိုက် ပဲ ဆိုပါတော့ ။ ဘာတွေပေါ်ကနေ ကျပြီး ဘာတွေပေါ် ပြန်တက်နေမှန်း (အမှန်အတိုင်း ပြောရရင်) ကိုယ့်ကို ကိုယ်မသိဘူး။
ဟုတ်တယ်ဗျ . . ။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ဓါတ်ကျတယ် ၊ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ပြန်ထိန်းရင်း ဘယ်ကို တက်နေမှန်းမသိဘူး။
ပုံပြင်ထဲမှာတော့ ခရုလေးက ကျလိုက် တက်လိုက်နဲ့ ခြံစည်းရိုးထိပ် ရောက်သွားတယ်တဲ့ ။ တော်တော်ဂွကျတာပဲ ဗျာ ။ အဲဒီခရုက ခြံစည်းရိုးပေါ် ဘာ တက်လုပ်မှာလည်း မသိဘူး နော် ။
Posted by မောင်ရှင်းသန့် at Friday, June 26, 20094comments
Posted by မောင်ရှင်းသန့် at Tuesday, June 23, 2009 8 comments